Toban Xildhibaan Oo Madaxweynaha u soo jeediyay inuu kala diro Golaha Deegaanka Hargeysa | Somaliland.Org
August 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Toban Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Deegaanka ee caasimada Hargeysa ayaa maanta Madaxweynaha Somaliland u soo jeediyay inuu kala diro Golahaasi ka dib markii ay ku eedeeyeen Maamulka dawlad Hoose inay xalaalaysteen hantidii ummadda.
Mudaneyaashaasi waxay sidaasi ku sheegeen shir jaraa’id oo ay maanta ku qabteen Huteelka Imperial ee Magaalada Hargeysa waxa kale oo ay si kulul u naqdiyeen Ku simaha Wasiirka Arrimaha Gudaha Md. Cismaan Garaad Soofe oo Joojiyay shir aan caadi ahayn oo ay dalbadeen Mudaneyaal ka tirsan Golaha Deegaanka.
Ugu horayn Ismaaciil Cabdi Cigge (Ismaaciil Caymis) oo ka hadlay shirkaasi jaraa’id waxa uu yidhi “Waxaanu halkan ku fadhinaa tiro Xildhibaano ah oo toban Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Deegaanka Hargeysa, waxaanu doonaynaa inaanu halkan kaga jalapeño jawaabna ka bxiino go’aana ku sheegno. Golihii digamma ee caasimaddu waxa uu noqday mid hawl gab ah oo hawshii sidii ugu dhamayd loo jojoba. Waxaana aanu arrintaasi u aragnaa kala diris dadban.”
Md. Ismaaciil Caymis waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto musuqmaasuqa dawlada Hoose waxaanu yidhi “Waxa Go’aankayagu yahay in kala dirista sifaha sharcigu yahay u marno oo aanu halkan ka caddayno wixii xeerku ka odhanayo arrintaasi, markii lagu jiray olalihii doorashada Madaxtooyada waxa uu Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu olalaha ku galay qodobo ay ka mid ahaayeen inuu furayo ururada Siyaasada. La dagaalanka Musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada. Waxaanu leenahay Ururadii Siyaasada waa la furay, cadaaladiina wax baa laga qabtay.tii ugu darned oo ahayd ladagaalanka Musuqmaasuqa in kasta oo uu dedaalay hanti dhawraha guud ee qaranku Talaabooyin aad u fiicanna ka qaaday Gobolada qaarkood sida Gabilay, Burco iyo Hargeysa wax ka qabqabtay laakiin markii uu Hanti dhawrku soo galay dawlada Hoose ee Hargeysa oo ahayd meeshii la doonayay inay noqoto tusaale qaran oo ay muraayad u noqoto la xisaabtanka waxa soo baxday in Tallaabadii ugu horeysay ee Hanti dhawrku ku soo eedeeyay Xoghayaha dawlada Hoose inuu si toos ah isu hor taagay Wasiirkii arrimaha Gudaha ee dhawaan is casilay. Warranties qabashada ee Xoghayahana uu jojoba. Xoghayihiina uu wali sii shaqaynayo.”
“Mudaneyaasha Golaha deegaanku waxay soo jeediyeen mooshin maamus ka Xayuubin ah oo Maayar Ku Xigeenka ah taasna waa la is hortaagay, waxaanu garan waynay sababta marka Hanti dhawrku uu soo galo dawlada Hoose ee \_Hargeysa waxba loo dhaqaajin la’yahay. Sidaas darted, maadaama oo aanu gacanta ku hayno wareegto uu soo qoray Wasiir Ku xigeenka Arrimaha gudaha ahna ku simaha Wasiirka Arrimaha gudaha oo leh Golaha deegaanku ma qabsan karaan shir aan caadi ahayn sabao ammaanka la xidhiidha dartood, waxaanu garan waynay sababta halka caasimadii Hargeysa asbaab nabadgelyo darro ah loo qaban waayay hawl,”ayuu yidhi Md. Ismaaciil Caymis.
Ismaaciil Caymis waxa uu Madaxweynaha Somaliland u soo jeediyay inuu kala diro Golaha Deegaanka ee caasimada Hargeysa waxaanu yidhi “Waxaanu leenahay Madaxweyne maadaama oo aanaan shaqadayadii u madax banaana yn waxaanu doonaynaa inaanu soo jeedino in sifaha sharciga ah nalagu kala diro. Kala dirista Golaha digamma waxa sheegaya xeerka Gobolada iyo degmooyinka qodobkiisa 30-aad haddii la doonayo in la kala diro Golaha Deegaanka waxa soo jeedin kara 8 xubnood, waxaana ansixin kara sadex dalooloow laba meelood. Halkan waxaanu ku fadhinaa in ka badan 8 Xubnood waxaanu soo jeedinaynaa maadaama oo aan loo ogolayn shaqo Golihii Deegaanka Hargeysa waxaanu soo jeedinaynaa inaad Madaxweyne kala dirto. Sadexdii xubnood ee maamulka fulinta dawlada Hoose oo ah Maayarkii, Maayar Kux igeenkii iyo Xoghayihiiba ay noqdeen kuwo ka magacaaban wasaaradda daakhiliga. Maamulkaasi maha kuwo wax ka dhagaysanaya Golihii maamulka u dhiibtay isla markaana si toos ah ugu tagri falaya hantidii ummadda.”
Ismaaciil Caymis waxa uu sheegay in dawlada Hoose ay gashay fadeexado badan oo musuqmaasuq isla markaana oo ay soo bandhigi doonaan.
Xildhibaan Jaamac Ismaaciil Cigge (Jaamac Shabeel) oo ka mid ah Golaha deeganaka Hargeysa ayaa sheegay inuu ka xun yahay in dawlada Hoose uu ka shaqayn la’yahay waligii sharcigii, waxaanu Madaxweyne Axmed Siilaanyo ka dalbaday inuu wax ka qabto farro gelinta uu ku sameeyay Ku simaha Wasiirka Arrimaha Guduhu fadhiyadii Golaha digamma caasimada Hargeysa.
“Waxaan Madaxweynaha u soo jeedinaynaa inuu kala diro Golaha Deegaanka Hargeysa si aan bulshada been loogu sheegin oo aan loo odhan Gole ayaa idiin jooga, waxaana maamulka dawlada Hoose xalaalaystay Musuqmaasuqii iyo hantidii ummada.Guddida fulinta ee dawlada Hoose wax kasta haddii aanu kula hadalo Gole deeegaan ahaan hadalkayagu ugama duwana dabaylahaas dhacaya sanqadhooda,”ayuu yidhi Md. Jaamac Ismaaciil Cigge.
Xildhibaan Yuusuf Kirix Cawad, ayaa sheegay inuu ka xun yahay tallaabada uu Wasiir ku xigeenka arrimaha guduhu ku Joojiyay fadhi aan caadi ahayn oo Golaha Deegaanka Hargeysa, waxaanu ku sifeeyay Ku simaha Wasiirka Arrimaha gudaha inuu dambi ka galay dalka oo uu wax u dhimay shuruucdii dalka.
Previous Post“Xaaladda Nabad-gelyadu way ka soo raynaysaa, waxaase jira culayso badan oo saamaynaya Ammaanka”Next PostMadaxweyne Siilaanyo oo shacbiga Somaliland Ku Hambalyeeyay Munaasibada Ciidul Fudriga	Blog